Isaphulelo Somfundi Esizwakalayo (2020) - Ukufinyelela kwamahhala kwezinsuku ezingama-30 - Izipesheli
Ungasithola Kanjani Isaphulelo Somfundi Esizwakalayo?
Abantu bathi iminyaka yakho yasekolishi yisikhathi esihle kakhulu sempilo yakho. Kepha, abazi ukuthi kungumzabalazo ongakanani kwabanye abafundi futhi bathambekele ekushiyeni ingxenye lapho unenkinga khona futhi uqoqa idola ngalinye lezincwadi, ukudla nokuphuma.
Imali ihlale iqine lapho usengumfundi futhi awukazimele okwamanje, nokuthi ukucindezela kwezezimali kungaba nzima impela lapho ubona iqiniso lokuthi kufanele uhlale phezulu ezifundweni zakho.
Uma kukhona into enhle esikhathini sanamuhla, yizaphulelo zabafundi. Izinkampani eziningi zinikela ngemikhiqizo nezinsizakalo zazo ngesaphulelo kulabo abadonsa kanzima phakathi neminyaka yokuphila kwabo ekolishi ngezifundo, ukubhala, ukucwaninga nokutadisha unyaka wabo wokugcina. Ukuba umfundi akulula kangako.
Ezwakalayo: Imininingwane emfushane & Isingeniso
Kuzwakale kuyindlela emangalisayo yokulalela izincwadi ngezinketho zobulungu zanyanga zonke futhi nendlela ama-audiobooks ayo aguqule ngayo umqondo wokufunda kumane nje kuwukucabanga kwengqondo.
Uma ubhalisela ukuzwakala, ungathola ukufinyelela ezincwadini ezingaphezu kuka-200,000 ongakhetha kuzo futhi futhi kuyindlela enhle yokulalela amanoveli wakho owathandayo futhi ungabelana ngolwazi olufanayo nabangane bakho noma umndeni wakho, okuyinto enhle impela .
Yonke imikhiqizo Ezwakalayo iyalandwa futhi igcinwe kulabhulali yakho ezwakalayo, lapho ungaya khona noma kunini futhi uyilalele noma uyilande kabusha noma kunini lapho udinga khona.Yonke imikhiqizo ingalalelwa kwimodi eku-inthanethi kanye nemodi engaxhunyiwe ku-inthanethi noma kumodi yendiza yedivayisi futhi futhi zonke izincwadi zingashintshaniswa ngomunye nganoma yisiphi isikhathi.
Ungalanda uhlelo lokusebenza ngqo kwi-smartphone yakho noma ulisebenzise nakwe-laptop yakho.Ungalalela amanoveli akho owathandayo noma kunini, ekhaya, ekolishi, epaki noma ejimini. Vele ufake ama-earphone akho bese ukhetha inoveli yakho oyithandayo.
Uma ungumfundi othanda ukufunda izincwadi noma ulalele nje ama-audiobooks nakanjani uzofuna ukusizakala nganoma iziphi izaphulelo zabafundi ezitholakala ku-Audible.Ezwakalayo njengamanje inesaphulelo somfundi okhethekile lapho ungathola isaphulelo esifinyelela ku-30% kanye nekhredithi engu- $ 10 ye-Amazon lapho ubhalisa.
Uhlelo lobulungu babafundi luhlobo nje olunesaphulelo lobulungu obujwayelekile obuzwakalayo lapho uzothola khona zonke izici ezifanayo Zokuzwakala.Lokhu kunikezwa kwesaphulelo empeleni kungokwamalungu amasha angakabhaliseli i-akhawunti ezwakalayo.Futhi, isikhathi esilinganiselwe, abafundi bangathola ama-audiobook ama-3 ngo- $ 3.00 nje - lokho kungama- $ 1 ngakunye kwabo.
Bheka Okunye Ukunikezwa Kwabafundi-
Isaphulelo se-Amazon Prime Student
Isaphulelo Sesitshudeni seNetflix?
Kumele Chofoza lapha .
Mane nje ungene ngemvume noma ubhalisele i-akhawunti yakho ye-UNiDAYS ukuqinisekisa ukufaneleka kwesaphulelo somfundi.
Uzothola ubulungu be- $ 9.95 ngenyanga cishe izinyanga ezimbili
Kuzofanele uphinde uqinisekise isimo sakho somfundi futhi uvuselele ubulungu bakho besitshudeni ngaphambi komgubho wakho wonyaka owodwa ngokuZwakalayo. Yebo, uma ungasiqinisekisi kabusha isimo sakho kanye / noma ungaseyena umfundi ofanelekayo, ukubhalisa kwakho kuzovuselelwa ngokwenani elijwayelekile lobulungu beGolide elizwakalayo. (Ungakhansela nganoma yisiphi isikhathi)
Uzokwazi ukuthola isilinganiso sezitshudeni esinephulelo seminyaka eyi-4 futhi ekupheleni konyaka wesine, ubulungu bakho bokuzwakalayo buzovuselelwa baba ubulungu obujwayelekile benyanga obuzwakalayo begolide.
Izinzuzo zokuba yilungu elizwakalayo lisebenzisa izaphulelo zabafundi:
Kuzwakale kungaba yindlela enhle yokwengeza umkhuba wakho wokuboleka umtapo wolwazi, ikakhulukazi lapho isaphulelo sabafundi sibiza u- $ 10 kuphela ngenyanga. (Kubonakala kukuhle, akunjalo?) Lokho kungu- $ 5 ngaphansi kobulungu obujwayelekile futhi uthola zonke izinzuzo ozithola ebulungwini begolide -
Uthola isikweletu esisodwa ngenyanga ongasisebenzisa kunoma yisiphi isihloko esitholakala kumtapo wezincwadi ozwakalayo- kanye nama-Original Audible Originals mahhala ngokuphelele.
Le nkampani ibuye ibe neziphesheli zansuku zonke nokuthengisa amabhuku njalo okutholakala kuphela kumalungu ayo, ngakho-ke ungahlala uthola izihloko ezimbili ngentengo eyodwa noma ephansi njengo- $ 2 kuphela.
Ukulalela kwamahhala, kwamahhala nokukhululekile kumabhuku alalelwayo azwakalayo. Ungamane ulande abaningi ngendlela ongathanda ngayo ngaphandle kwezindleko ezingeziwe ezifihliwe!
Uma ngolunye usuku noma ungabukhansela ubulungu, wonke ama-audiobooks kulabhulali yakho Ezwakalayo kumane kungokwakho futhi kungokwakho kuphela ukugcina.
Uthola iningi lama-audiobook owakhetha njalo ngenyanga, ngaphandle kwentengo.
Ungakwazi nokushintshanisa ama-audiobooks akho mahhala uma ungathandi.
Noma ngabe ufuna ukulalela incwadi edinga ukufundwa noma ungene kwelinye izwe lamaNoveli akho owathandayo, Ezwakalayo inezinkulungwane zezihloko ongazitholela zona.
Ukuzwakala akugcini ngokulalela izincwadi eziqanjiwe kuphela, kepha iningi labafundi futhi lingakusebenzisa ukuthola ezinye izindaba ezihambisana nezifundo zabo. Ezwakalayo ikunikeza intengo ebekiwe nge-audiobook ngayinye ongayithenga uma uthanda, ngaphandle kwenkontileka noma isibopho esiqhubekayo.
Ubulungu Bezitshudeni Ezwakalayo bukunika isaphulelo esingu-30%, noma cishe nje u- $ 9.95 ngenyanga. Ngalokho, kufaka izihloko ezintathu njalo ngenyanga, eyodwa yincwadi yezwi kanye nama-Audible Originals amabili kanye nokusebenza okuqondiswa ngomsindo. Uthola futhi isikweletu sokuphromotha esingu- $ 10 se-Amazon.com lapho ubhalisela Okuzwakalayo.
Awudingi ukuphatha noma yiziphi izincwadi ezengeziwe nezisindayo nomaphi lapho uya khona manje, ungavele usebenzise i-Audible futhi uthathe izincwadi zakho uhambe nazo kuselula yakho, ithebhulethi noma ilaptop noma yikuphi lapho uya khona.
Vele ulande uhlelo lokusebenza kudivayisi yakho oyithandayo bese uqala ukulalela ama-audiobooks. Futhi, uma usulande i-audiobook, awudingi ukuxhuma ku-Wi-Fi ukuze ulalele. Ngakho-ke, ungakujabulela ukulalela noma kuphi nganoma yisiphi isikhathi yize ungaxhunyiwe ku-inthanethi.
Okubhaliselwe kuvame ukuqala ngesivivinyo samahhala sezinsuku ezingama-30, ukuze uzame ukungazwakala ngaphambi kokukuthenga!Futhi, uma ngabe uhlela ukukhansela ubulungu ngosuku oluthile okungenzeka futhi kube lula. Ukukhuluma iqiniso, ubulungu obuzwakalayo obukhokhelwa ngenyanga kulula futhi isinqumo esifanele kubafundi abaningi.
Amamodeli we-iPhone 12 Pro (A2341, A2406, A2407, A2408)
Landa iTencent Gaming Buddy Windows 10